Ngemuva kokunqoba kukaJamala e-Stockholm, kwacaca abaningi ukuthi i-"Eurovision 2017" ingaba yinto emangalisa kakhulu emlandweni walo mncintiswano. Futhi kwenzeka. Ngaphambi kokuba umcimbi uqale enye inyanga nengxenye, futhi izinkanuko nezinyathelo ezizungeze i- "Eurovision 2017" eKiev sezivele zisezingeni elikhulu.
Izolo, abezindaba babike izindaba zakamuva mayelana nokuvinjelwa kokungena kwe-SBU e-Ukraine kumncintiswano waseRashiya u-Yulia Samoilova. Ngokusho kwalesi sinqumo, umculi ngeke akwazi ukungena emphakathini osondelene iminyaka emithathu.
Izindaba zakamuva azizange zifike njengamangalisa. Izikhulu zase-Ukraine zathinteka ekuthuthukiseni izenzakalo ngokushesha, njengoba iRussia yamemezela igama lomhlanganyeli ozoya eKiev. Noma kunjalo, kwasala ithemba lokuthi ohlangothini lwe-Ukraine angeke abe nepolitiki emncintiswaneni womculo.
Izidumi zimelela ukukhwabanisa i- "Eurovision 2017" yaseRussia
Unyaka ngamunye baningi ababa yi-Eurovision yanamuhla. Kusukela esimbukisweni esihle esimnandi, lo mncintiswano waba umboniso wokubekezelelana okungenangqondo nokuthandwa kwezombusazwe.
Ukunqoba okungaqondakali kwe-"lady-woman" yezinyosi, ukubonisana ngokubambisana eStockholm kwavusa izingcingo eziningi ezivela eRussia ukuhoxisa kwi-Eurovision Song Contest.
Manje, lapho izwe elibambe iqhaza livuma ukuvumela umhlanganyeli waseRashiya ukuba ahlanganyele emncintiswaneni, izinkulumo mayelana nokukhwabanisa zaqhamuka ngamandla amakhulu. Osopolitiki abaningi abadumile nabaculi bafuna ukwenqaba ukubamba iqhaza kule phrojekthi ekhanyayo.
Sekuyisikhathi eside ukuthi uFiliphu Kirkorov ubelokhu engumdlali ozinikele we-Eurovision, kodwa ukholelwa nokuthi ngemuva kokuvinjelwa kokungena ku-Yulia Samoilova, kubalulekile ukuphoqa umncintiswano. Umculi wabika lokhu esitokisini sakhe:
Ngikholelwa ngokuqinile ukuthi iRussia kufanele inqabe ukuhlanganyela emncintiswaneni kuze kube yilapho bonke abantu abaphethe lesi sinqumo bememezela ukungahloniphi kwabo emsebenzini, ngeke bashiye, futhi i-Eurovision Song Contest ngeke iqale ukulandela umgomo owadalwa kuwo.
Ngubani esikhundleni sikaJulia Samoilova ozokwenza eKiev ku-Eurovision 2017?
Abahleli beRussia emncintiswaneni babhekene nokukhetha okunzima: ukushaya i-Eurovision Song Contest ngo-2017 eKiev, noma ukunikela ngomhlanganyeli omusha ozosingatha iziphathimandla zase-Ukraine futhi ozoya ku-Eurovision 2017 esikhundleni se-Yuliya Samoilova.
Cindezela unobhala kaVladimir Putin uDmitry Peskov wakhuluma ngokushiya kukaYulia Samoilova:
Angazi ngesinqumo sabahleli bethu, kodwa, njengoba ngikuqonda, ayikho indlela enjengokuthi esikhundleni
Akukho zinguquko ezihleliwe ohlangothini lwaseRussia - uJulia Samoilova usakulungele ukwenza ku-Eurovision 2017 eKiev. Ngendlela, ubuholi be-First Channel bubike ukuthi uma iKi Kiev ingashintshi isinqumo sayo, iSamoilova izophuma ngaphandle komncintiswano ukumela iRussia ku-Eurovision Song Contest 2018.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngaphandle kokuhlanganyela emncintiswaneni kaJulia Samoilova, iziteshi ze-TV zaseRussia ngeke zisakaze i- "Eurovision 2017".
I-European Broadcasting Union yamema uJulia Samoilova ukuba akhulume ku-Eurovision eKiev ekude: ukusabela kohlangothi lwaseRussia
Abahleli be-Eurovision Song Contest bafanele bathole indlela yokuphuma kwesimo samanje ngokusheshisa. I-European Broadcasting Union (EBU) ishicilele isinqumo sayo ekhasini elisemthethweni lomncintiswano. Ngokokuqala ngqa eminyakeni engu-60 kusukela ekusungulweni kwe- "Eurovision", abahleli bayo bahlongozwa ukuba baphambuke emithethweni futhi basakaze inkulumo kaJulia Samoilova nge-satellite. Ngakho-ke, uJulia Samoilova angahlanganyela "kwi-Eurovision-2017". Engalindele isinqumo se-First Channel, esacelwe ukuba sinikeze ukusakazwa okunjalo, abameleli baseKiev bephuthumayo ukuveza ukungavumelani kwabo. E-Twitter, u-Vice-Premier of Ukraine u-Vyacheslav Kirilenko, okulandelayo kuvele:
Ukuhunyushwa kwenkulumo kaSamoilova yiziteshi zethelevishini zase-Ukraine ukwephulwa kwemithetho yase-Ukraine, kanye nokungena kwakhe e-Ukraine. [I-European Broadcasting Union] I-EBU kufanele ikhumbule lokhu
Kodwa-ke, i-First Channel isimemezele ngokomthetho ukuthi inqaba isiphakamiso se-EBU, siphakamisa ukuthi abahleli basebenza kuphela emithethweni emiswe umncintiswano:
... Ukwenqaba kukaYulia Samoilova ukungena ensimini ye-Ukraine kwephula imithetho yomncintiswano. Sibheka ukunikezwa kokubamba iqhaza emkhakheni futhi sikulahle, njengoba kuphikisana ngokuqondile nalokho okushiwo umcimbi, ukubusa okuqinile okuyiwona osebenzayo esiteshini se-Eurovision. Sikholelwa ukuthi i-European Broadcasting Union akumele ifake imithetho emisha yomhlanganyeli waseRashiya ngo-2017 futhi ikwazi ukubamba umncintiswano ngokuhambisana nemithetho yayo.
U-Alexey Panin wamhleka kabi unina wentombi yakhe, ividiyo
U-Nikita Dzhigurda wakhohlisa bonke: inkantolo yamphika ifa lakhe iBratash
Ubuholi besifazane: ukuhola njengomuntu?
Indlela yokukhetha izimonyo ezifanele zokunakekelwa kwezinwele
I-Horoscope ka-2010, amawele wezintombazane
Isaladi nge-peas eluhlaza
I-black currant morse
Yini abantu abangayithandi ngobulili?
Amasks asekelwe ku-kefir ngezinwele
Kungani intombazane ifuna ukwenza tattoo?